Xildhibaannada golaha shacabka oo ansixiyay wax ka bedelka sharciga xisbiyada siyaasadda – HalQaran.com
Xildhibaannada golaha shacabka oo ansixiyay wax ka bedelka sharciga xisbiyada siyaasadda
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada Muqdisho waxa ay ku yeesheen mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa.
Kulanka oo ahaa midkii 18-aad ee kalfadhiga 7-aad ee Golaha ayaa waxaa Shir Guddoomiyay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, isla markaana waxaa ka qeyb galay 142 Xildhibaan.
Xildhibaanada ayaa dood dheer ay yeesheen, waxa ay ku ansixiyeen Wax ka Bedelka Sharciga Xisbiyadda Siyaasadda oo horey Mudanayaasha Baarlamaanka Akhrinta Koowaad iyo labaad u marsiiyeen.
137 Xildhibaan ayaa ogolaatay in la ansixiyo Wax ka Bedelka Sharciga Xisbiyadda Siyaasadda, waxaa diiday Saddex Xildhibaan, halka 2 Mudane ay ka aamuseen.
Guddoomiye Mursal ayaa ku dhawaaqay natiijada kasoo baxday Coddeeynta, isla markaana waxaa uu shaaciyay in Xildhibaanada ay ansixiyeen wax ka Bedelka Sharciga Xisbiyadda Siyaasadda.
Tags: ansixiyay wax ka bedelka, sharciga xisbiyadda siyaasadda, Xildhibaannada golaha shacabka
Wasaaradda Waxbarashada oo soo xirtay imtixaankii Shahaadiga ee Dugsiga sare